morgan ­tsvangirai on News24
ARTICLES RELATING TO MORGAN ­TSVANGIRAI
Here is an overview of the history of Zimbabwe as it goes to the polls to elect a successor to ousted president Robert Mugabe.
Zimbabwean President Emmerson Mnangagwa has reportedly congratulated his rival Nelson Chamisa, following his appointment as the presidential candidate for the MDC Alliance in the forthcoming elections.
Zimbabwe's main opposition has named a former youth activist, Nelson Chamisa, as its candidate for upcoming presidential polls, the party's first major test since the death of its charismatic leader and the ouster of Robert Mugabe.
Zimbabwe's opposition, the MDC spokesperson, Obert Gutu, has reportedly said that he has not quit politics, adding that he would be contesting for a parliamentary seat in the Harare east constituency.
Air Namibia plane has been impounded as Zimbabwean man sues for $1m, and former Zimbabwe president Robert Mugabe’s son-in-law is wanted by police on allegations he detained a senior airline company official against her will.
Zimbabwe's President Emmerson Mnangagwa has urged war veterans to play a central role in campaigning for the ruling Zanu-PF party ahead of elections due in July or August.
President Emmerson Mnangagwa has reportedly briefed his Democratic Republic of Congo counterpart Joseph Kabila on the political transition in Zimbabwe, and a court in Lagos has seized penthouses from Nigeria's former oil minister.
Zimbabwean chiefs have reportedly thrown their weight behind the ruling Zanu-PF party, saying that they would not allow a "toddler" to rule the southern African country.
Some Zanu-PF youths were reportedly "shocked" to hear that ex-president Robert Mugabe was no longer the ruling party’s leader.